Abaalmarinta Caddaaladda - Argagixisnimo Loo Raadinayo - Radullan Sahiron
Abaalmarin Gaaraysa Illaa $1 Milyan
Radullan Sahiron waa hogamiye sare oo ka tirsan Kooxda Abu Sayyaf ee dalka Filibiin s (ASG). Ururku wuxuu ka soo go’ay urur weynaha Moro National Liberation Front horaantii 1990-kii markuu hoggaminaye Abdurajak Abubakar Janjalani, oo lagu dilay dagaal uu la galay booliska Filibiin bishii Disembar 1998-kii. Walaalkiis ka yaraa, Khadaffy Janjalani, ayaa baddelay oo hogaamiye magac ahaaned ururka ka noqday. Bishii Sebtembar 2006-dii, Khadaffy Janjalani waxuu ku dhintay is rasaasayn ay isdhaafsadeen Ciidamada Hubeysan ee dalka Filibiin. Radullan Sahiron ayaa loo maleeynayaa inuu yahay hoggamiyaha cusub ee ASG.
Rag, dumar iyo carruur badan aan dambi lahayn ayaa ku dhintay , dhawaacmay ama ku naafowday falalka u sameeyey Sahiron. Sahiron waxuu door weyn ka qaatay bishii Maayo 2001-dii goobta Dos Palmas afduubkii saddexda qof ee Mareykanka ah, oo ku jiran Martin iyo Gracia Burnham, iyo 17 qof oo Filibiin ah ee ka dhacay goobta dalxiiska ee Palawan, dalka Filibiin. Qaar badan la haysteeyasha ka mid ah ayaa la dilay, uu ku jiro qofka Mareykanka Guillermo Sobero.
Waxaa la rumaysan yahay inuu Sahiron ku dhuumanayo koonfurta Mindanao, halkaas uu ka wado abaabulkiisi argaggaxiso oo waxyeelaynaya bulshada. Xilka hoggamine uu ka hayo ASG, oo falalkooda argaggaxiso sababtay dhimashada dad u dhashay dalka Mareykan iyo Filibiin. Masuuliyiinta Mareykanku waxa ay ku tilmaaman Sahiron inuu halis ku yahay muwaadiniinta Mareykanka iyo Filibiinka, iyo danahooda.
Sahiron waxuu ku beelay gacanta midig dagaal ciidamada amniga ee sanadkii 1970s. Waxuu si wanaagsan ugu hadlay afka Caraabiga iyo Tausug.